ESI TINYE EKWENTỊ NA BLACKLIST NA ANDROID - A GAM AKPORO - 2019
Isi A gam akporo
Tinye otu kọntaktị na "ndepụta nwa" na gam akporo
Ọ bụrụ na ị na-eziga spam dị iche iche mgbe ụfọdụ site na nọmba ụfọdụ, mee oku ndị a na-achọghị, wdg, mgbe ahụ i nwere ike igbochi ya na iji arụmọrụ gam akporo.
Usoro mkpọchi kọntaktị
Na nsụgharị nke oge gam akporo, usoro nke igbochi ọnụ ọgụgụ dị nnọọ mfe ma rụọ ọrụ dịka ntụziaka ndị a:
Gaa "Ndi ana-akpo".
N'ime ndị ana-akpọ gị echekwara, chọta otu ị ga-achọ igbochi.
Leba anya na akara ngosi nke ellipsis ma ọ bụ gia.
Na nchịkọta nhọrọ ma ọ bụ na windo dị iche, họrọ "Gbochie".
Kwenye omume gị.
Na nsụgharị ndị okenye nke gam akporo, usoro ahụ nwere ike ịbụ ntakịrị mgbagwoju anya, n'ihi na kama "Gbochie" dị mkpa itinye "Ozi olu naanị" ma ọ bụ Ekwela ka nsogbu. Ọzọkwa, ma eleghị anya, ị ga-enwe mgbakwunye ọzọ ebe ị nwere ike ịhọrọ ihe ị ga-achọ ịnata site na kọntaktị egbochi (oku, ozi olu, SMS).
https://termotools.com ig.termotools.com © A gam akporo 2019